Al-Shabaab oo soo badhigay ninkii isku Qarxiyay Saldhiga Buulo-Mareer – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaAl-Shabaab oo soo badhigay ninkii isku Qarxiyay Saldhiga Buulo-Mareer
Hiiraan Xog, Apr 9, 2018:- Warbaahinta Al-Shabaab ayaa waxa ay soo bandhigeen Wareysi laga duubay mid ka mid ah raggii isku Qarxiyay Xerada Ciidamada AMISOM ee Buulo Mareer 1-dii Bishan.
Sacad Xuseen Xaashi oo 42 sano jir ahaa, ayaa ka mid ahaa raggii kaxeynayay gaadiidka Qaraxyada ay ka buuxeen ee xerada ciidamada AMISOM lagu weeraray, Warbaahinta Al-Shabaab ayaa sheegtay ninkan 42 sano jirka ah inuu ka soo jeeda Gobolka Mudug ee Bartamaha Soomaaliya.
Wareysiga maqalka ah ee laga duubay ninkan, ayaa wuxuu ku sheegay inuu doortay isqarxinta si uu ugu dhibaateeyo jirkiisa ciidamada Shisheeye ee ku sugan Soomaaliya.
Inkastoo Sacad Xuseen Xaashi uu isku Qarxiyay afaafka hore ee Xerada ciidamada AMISOM ee Buulo Mareer, haddana isqarxintiisa waxa ay ciidamada AlShabaab u fududeysay weerarka ay ku qadeen Saldhiga ciidamada AMISOM ee Buulo Mareer.
Ismiidaamiye Sacad ayaa kula dardaarmay xubnaha kale ee ka dambeeya ee AlShabaab ka tirsan inay sii wadaan dagaalka ka dhanka ah ciidamada Shisheeye ee ku sugan gudaha Soomaaliya.